8 Lapho livula+ uphawu lwesikhombisa,+ kwathula kwathi cwaka ezulwini cishe ingxenye yehora. 2 Ngabona izingelosi eziyisikhombisa+ ezima phambi kukaNkulunkulu, zanikwa amacilongo ayisikhombisa. 3 Enye ingelosi yafika yema e-altare,+ iphethe isitsha sempepho segolide; yanikwa impepho+ eningi ukuba iyinikele kanye nemithandazo yabo bonke abangcwele e-altare legolide elaliphambi kwesihlalo sobukhosi. 4 Umusi wempepho wanyuka uphuma esandleni sengelosi kanye nemithandazo+ yabangcwele phambi kukaNkulunkulu. 5 Kodwa ngaso leso sikhathi ingelosi yathatha isitsha sempepho, yasigcwalisa ngomunye womlilo+ wase-altare yawuphonsa emhlabeni.+ Kwaduma izulu+ kwaba khona amazwi nemibani+ nokuzamazama komhlaba.+ 6 Izingelosi eziyisikhombisa eziphethe amacilongo+ ayisikhombisa+ zalungiselela ukuwashaya. 7 Eyokuqala yashaya icilongo layo. Kwaba khona isichotho nomlilo,+ kuxubene negazi, kwaphonswa emhlabeni; ingxenye yesithathu yomhlaba yasha,+ nengxenye yesithathu yemithi yasha, nazo zonke izimila eziluhlaza+ zasha. 8 Ingelosi yesibili yashaya icilongo layo. Okuthile okunjengentaba+ enkulu evutha umlilo kwaphonswa olwandle.+ Ingxenye yesithathu yolwandle yaba yigazi;+ 9 ingxenye yesithathu yezidalwa zasolwandle ezinemiphefumulo yafa,+ nengxenye yesithathu yemikhumbi yaphihlizeka. 10 Ingelosi yesithathu yashaya icilongo layo. Inkanyezi enkulu evutha njengesibani yawa isuka ezulwini,+ yawela engxenyeni yesithathu yemifula nasemithonjeni yamanzi.+ 11 Igama lale nkanyezi kuthiwa uMhlonyane. Ingxenye yesithathu yamanzi yaphenduka umhlonyane, futhi abaningi kubantu bafa ngenxa yala manzi, ngoba ayenziwe ababa.+ 12 Ingelosi yesine yashaya icilongo layo. Ingxenye yesithathu yelanga yashaywa nengxenye yesithathu yenyanga nengxenye yesithathu yezinkanyezi, ukuze ingxenye yesithathu yazo yenziwe ibe mnyama+ futhi ingxenye yesithathu+ yosuku ingakhanyi, nobusuku ngokufanayo. 13 Ngabona, futhi ngezwa ukhozi+ lundiza emkhathini+ luthi ngezwi elikhulu: “Mayé, mayé, mayé+ kulabo abahlala emhlabeni ngenxa yakho konke okunye ukukhala kwamacilongo ezingelosi ezintathu esezizoshaya amacilongo azo!”+